Astaamaha Karyn Sciortino Johnson
Wadahadal lala yeeshay Karyn Sciortino Johnson
Karyn Sciortino Johnson, kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo maareeyaha ka mid noqoshada McKnight, ayaa dhawaan ka hadashay guddi ka tirsan Golaha Minnesota ee Aasaaska shir sannadeedka. Ka qaybgalayaashu waxay ka doodeen fursadaha iyo caqabadaha ka shaqaynta kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada (DEI) ee Minnesota oo dhan, iyo sida ay tixgalinta DEI u kala duwanaan karto bulshooyinka oo dhan. Kuwa soo socdaa waa qayb ka mid ah wada hadalka, oo la tafatiray si ay u dheeraato oo cad.
Karyn Sciortino Johnson oo ku jirtay tababarka shaqaalaha oo dhan diiradda lagu saaray DEI. Xuquuqda sawirka: Molly Miles
S: Sideed u qeexday shaqadaada DEI?
Karyn: DEI waa qalab lagu isticmaalo awoodeena shaqsi iyo mid guud si aan u abuurno shuruudaha si dad badan ay u noqdaan naftooda hal abuur leh. Waa hab-dhaqan qoto-dheer oo macnaha guud u muuqda oo dareemaya ka duwanaanshiyaha marxalad kasta oo ururka dhexdiisa ah. Waxaan ku hawlanahay shaqadan sababtoo ah waxay udub dhexaad u tahay himiladeena iyo sida aan u dhaqaajin doono aasaaskayaga iyo bulshooyinkayada.
S: Maxay shaqada McKnight's DEI u ekayd goor hore?
Karyn: In kasta oo tobannaan sano oo la samaynayey, soo-bandhigiddayadii ugu dambeysay ee shaqada DEI waxay bilaabatay 2016, markii guddigayadu ay weydiiyeen su'aasha: Sideen si fiican u fahmi karnaa nuucyada kakan ee kala duwanaanshaha jinsiyadeed ee waxbarashada iyo shaqada ee Minnesota? Tani waxay ahayd dhibic is-rogid oo muhiim ah. Ilaa waagaas, waxa aanu u janjeedhsanay in aanu qaabaynno kala duwanaanshiyaha dhinaca dhaqalaha-bulsheed, waxana aanu qaadanay qaab midab-indho la'aan ah. Waxay ahayd waqti muhiim ah inaan sameyno go'aan dadweyne oo ku saabsan jinsiyad-iyo habka, in la qiro in sababta keentay kala duwanaanshiyaha joogtada ah ee gobolkeena aan lagu sharxi karin oo kaliya dabaqada dhaqaalaha. Waxay ahayd inaan tixgelinno nidaamyada iyo siyaasadaha waaweyn ee taariikhiga ah, qaabdhismeedka, iyo hay'adaha ee kala sooca jinsiyadda.
S: Maxaa ku wargeliyay xeeladahaaga?
Karyn: Waxaan markii hore u jeesannay khubarada aqoonta dhaqamada kala duwan si ay nooga caawiyaan dhisidda awooddayada aan ku maareyno kala duwanaanshaha dhaqanka. Si wada jir ah, waxaan u qaabeynay qaab korriineed - si tartiib ah oo ku-socota shaqadeena DEI. 2016-kii, si cad uma aynaan fahmin dhaqankeena iyo sida uu u saameeyay dadkeena-iyo sida ay dadkeenu u dhexgalaan bulshada dhexdeeda. Waxaan ku bilownay in aan aqoonsanno oo baarno caadooyinkayada iyo qiyamkayada-sida aan u dhaqmeyno, u fikirno, oo aan u aaminsanahay-si aan u abuurno faham la wadaago oo ku saabsan dhaqanka ururkayaga. Ka dib shaqaalaheennu waxay samaysteen kooxo-shaqaale DEI iyagoo isticmaalaya lenska DEI siyaasad ama dhaqan gaar ah.
"DEI waa qalab lagu isticmaalo awoodeena shakhsi ahaaneed iyo wadajirka si aan u abuurno shuruudaha si dad badani ay u noqdaan naftooda hal-abuur leh." —KARYN SCIORTINO JOHNSON, KALA DUWANAANSHAHA, SANAANKA, IYO MAAMULAHA KU DARAYNTA
Dhamaadka 2017, waxaan diyaar u ahayn inaan wax ka barano sinnaan la'aanta hay'adaha. Waxaan horumarinay awooda lagu fahmo sheeko ka adag. Taasna waxay la macno tahay inaan diyaar u nahay inaan la halgamno ku dhaqanka qiyamkayaga.
Maanta, waxaan isticmaalnaa habka horumarinta sida aragtida isbeddelka. Waxaan dejineynaa yoolal urureed iyo waaxeed si aan u isticmaalno awoodeena siyaabo kala duwan, waxaanan ka shaqeyneynaa inaan noqono goob shaqo oo aad u kala duwan, loo siman yahay, oo loo wada dhan yahay, lammaane bulsho, iyo beddeleyaal.
S: Waa maxay ballanqaadyada DEI uu sameeyay McKnight?
Karyn: Sannadka 2018, Mu'asasadu waxay samaysay markii ugu horreysay abid Warbixinta DEI-oo hadalkani markii dambe saameeyay habka aan u fikirnay oo aanu u abuurnay qaab-dhismeedka istaraatiijiyadeed ee McKnight. Dukumeentigan, waxaan si cad ugu magacownay DEI iyo sinnaanta jinsiyadda inay yihiin qiyamka asaasiga ah ee sida aan u wajaheyno shaqadeena.
Run ahaantii, markii aan ka fikirnay inaan sii deyno bayaanka DEI, waxaan qabnay walaac ku saabsan samaynta ballanqaad dadweyne markii aan ku jirnay marxaladaha hore ee shaqadayada gudaha DEI. Haddana, waxaan dareennay inay muhiim tahay in aan wadaagno hammiyadayada ka hor inta aan la socon ballan-qaadyadaas DEI.
Fiidiyow la sameeyay horudhac hadalka McKnight's DEI oo muujinaya aragtida adduunka aan ka shaqeyneyno inaan dhisno.
S: Siyaalahee ayaa leh McKnight wuxuu raacay ballan-qaadyadaas?
Karyn: Tan iyo markii McKnight Foundation ay soo saartay bayaankeeda DEI, guddigayaga iyo shaqaalaheenna waxay si adag u xajiyeen mabda'a ah inaan u baahanahay inaan ku taageerno ereyadayada ficillo. Dhawaan Sinnaanta gudaha Ficil warbixinta dukumeenti tusaalooyin ah isbedellada aan ku qaadnay Foundation si ay ugu janjeeraan urur aad u kala duwan, loo dhan yahay, iyo sinaanta ku jihaysan.
Afartii sano ee la soo dhaafay, McKnight waxa uu sameeyay isbeddello ku saabsan sida aan u isticmaalno codkeena dadweynaha, u samayno deeqaha, maalgelinta lacagaha, shirarka la-hawlgalayaasha, iyo la shaqaynta iibiyeyaasha. Dadaalkayaga DEI waa shaqo socota, iyadoo shaqadani aysan mar walba raacin waddo siman ama toosan, aasaaska ayaa runtii sameeyay horumar. Waxaan ku dhiirigelinaynaa ururada kale inay bilaabaan halka ay joogaan oo ay u qaadaan tillaabooyin dhanka DEI ah dhammaan dhinacyada shaqadooda - iyadoo xitaa tillaabooyinka ugu yar ay isku darsamaan waqti ka dib.
S: Waa maxay tusaale ahaan sida ay shaqadaada DEI ugu ekaan karto ficil ahaan?
Karyn: Tusaalaha barnaamij ee weyn ayaa ah in sanadka 2020, aanu daahfurnay barnaamijkeena cusub ee Bulshooyinka Firfircoon iyo Sinnaanta—oo si cad diiradda u saaraya sinnaanta iyo ka mid noqoshada Minnesota. Halkii laga heli lahaa dhawr mashruuc oo DEI ah oo halkan iyo halkaas ah, sinnaantu waxay noqotay meel laga soo galo barnaamijyadeena [Farshaxanka & Dhaqanka, Barnaamijka Cilmi-baarista Dalagga Iskaashatada, Bulshooyinka, Cimilada Midwest & Tamarta, Cilmiga Neuroscience] iyo hadafyada hawlgelinta.
Tusaalaha hawl-fulinta ee dhawaanahan dambe waa siyaasadda kala duwanaanshaha iibiyeyaasha ee aanu horumarinay sanadkan. Hadafkayagu waa in aan kor u qaadno cadaalada iyo ka mid noqoshada iibiyeyaashayada oo dhan iyo in aan kordhino fursadaha kooxaha aan la matalin si ay alaab iyo adeegyo u siiyaan Mu'asasada. Waxaan la shaqeynayaa waaxyadayada gudaha si aan u fahanno nidaamka deegaanka ee iibiyaasha, iyo sida ay u milicsadaanght aan kala duwanno oo aan dhisno xidhiidho dhab ah oo lala xisaabtami karo oo lala yeesho ganacsiyada bulshadeena.
S: Maxay yihiin qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee shaqada DEI gudaha?
Karyn: Qof kastaa wuxuu leeyahay shaqo u gaar ah oo uu qabto. Midkeen kastaaba waxa aanu leenahay shaqo kala duwan, taas oo ku salaysan waaya-aragnimadeena nololeed, aqoonta, iyo heerarka khibradeena. Haddii aan u dhaqanno sida qaar naga mid ah la dhammeeyey oo aan sugayno kuwa kale inay "qabtaan," waxtar ma leh. Waxay soo diraysaa fariin qaboojin ah oo ina kala qaybisa. Waxaan filayaa in caqabadu ay tahay in aan ogaano halka aan ka joogno shaqadayada, ka dibna sida aan horay ugu socono. Waxaan ku bilaabi karnaa istaraatiijiyad tababar oo dhan oo shaqaalaha ah, laakiin taasi kuma filna maalmahan.
Waxaan leenahay hammi urureed, waaxeed, iyo shaqsi oo ku saabsan DEI. Qaarkood waxayba u qaadanayaan habka DEI ee shaqadooda maalinlaha ah, halka kuwa kalena ay u baahan yihiin noocyo kala duwan oo taageero iyo wacyi gelin ah oo ku saabsan inay doortaan inay isticmaalaan awooddooda si ay u qaataan habka DEI. Ma aha wax aad u badan samaynta kiis sababta DEI ay muhiim u tahay - taasi mar horeba waa la bixiyay. Waa wax badan oo ku saabsan waxa aqoonta, xirfadaha, iyo khibrada loo baahan yahay si ay ula wareegaan lahaanshaha DEI.
"Si aan u horumarino himiladeena adduun adag oo aan la hubin, waxaan u baahannahay inaan sii wadno dhisidda xirfadaheena si aan uga qayb-galno dadka siyaabo kala duwan." —KARYN SCIORTINO JOHNSON, KALA DUWANAANSHAHA, SANAANKA, IYO MAAMULAHA KU DARAYNTA
S: Sideed uga gudbi kartaa kala duwanaanshaha?
Karyn: Waxaan daneynaa sida loola xiriiro siyaabaha isku xira kala duwanaanshaha dhaqameed iyo bulshooyinka kala duwan, waxaanan wali isku dayeynaa inaan cadeyno sida si wanaagsan loo sameeyo. Waxaan fahamsanahay in heerarka sare ee aqoonta dhaqamada dhexdooda ay noo suurta gelisay inaan dadka iyo adduunka ku aragno aragtiyo kala duwan; in si wax ku ool ah loola xiriiro dad kala duwan; Si aad u waydiiso su'aalo ku habboon oo waxtar leh oo aad u furfurnaato noocyada kala duwan ee jawaabaha. Dhammaan xirfadahan waxay ka dhigan yihiin inaan awoodno inaan ku hoggaaminno geesinimo iyo is-hoosaysiin labadaba iyadoo weli ku qotonta hadafkeenna iyo qiyamkayada.¹
Waxaan rabnaa inaan horumarino cadaalad badan, hal abuur leh, iyo mustaqbal badan halkaas oo dadka iyo meeraha ay ku koraan. Si aan u horumarino himiladeena adduun adag oo aan la hubin, waxaan u baahanahay inaan sii wadno dhisitaanka xirfadaheena si aan dadka uga qayb galno farqiga u dhexeeya. Taas waxaa ku jira dad laga yaabo inay ku kala aragti duwan yihiin sida loo xalliyo dhibaatada ama nooca dhibaatada. Waxaan rabnaa inaan meel u dhigno dad kala duwan si ay uga qayb qaataan arrimaha sida cimilada iyo sinnaanta jinsiyadda si ay u kiciyaan fikrado, fikrado, iyo sheekooyin cusub.
Waxaa noo harsan shaqo badan iyo wax badan oo aan baran karno. Waxaan ognahay xididdada sinaan la'aantu inay qoto dheer tahay oo dhismeed. Waxaan sii wadi doonaa barashada, dhageysiga, dib u milicsiga, iyo hadalka-si daah-furan-si aan u hormarino kala duwananshiyaha, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada gudaha iyo dibadda Aasaaska.
¹Fikrad uu sameeyay Interculturalist, LLC